Telesto: Rindrambaiko Fitantanana Finday Sy Vahaolana Amin'ny Birao Fitantanana
Telesto no fitantanana lisitra feno sy matanjaka indrindra mifantoka amin'ny fanampiana ny tompona orinasa kely, ny ekipa ary ny olona tsirairay hitantana ny vokatra.
Inona No Azon'ny Telesto Atao Aminao
Araho maso ny tahirinao
Makà mailaka ary atosiho fampandrenesana eo noho eo rehefa eo ambany ny stock ny vokatrao.
Data momba ny lisitra amin'ny fotoana tena izy
Ampidiro amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny biraonao na amin'ny Internet ny data-nao.
Ataovy mandeha ho azy ny lahasa ifotony mba hahafahanao mifantoka amin'ireo zava-dehibe indrindra. Veloma ny hadisoan'ny olombelona!
Hihaona Amin'ny Fanontana Amin'ny Birao
Ny endri-javatra mahery vaika rehetra avy amin'ny App finday izao ao amin'ny biraonao!
Aza manafatra mora foana ny vokatrao rehetra avy amin'ny rakitra .CSV na Excel.
Mamorona tahiry eo an-toerana ny tahirin-kevitrao isaky ny irinao.
Hita amin'ny rafitra fiasa Windows sy MacOS. Linux ho avy tsy ho ela.
Ataovy voalamina ny vokatrao na ny fanananao, sokajio izy ireo, omeo kaody fampiasa, zahao ny tahiry ambany ary maro hafa.
Tatitra Mahery Sy
Miteraha rakitra PDF, Excel na CSV amin'ny paompy fotsiny; sivana ny tatitra ataonao amin'ny vokatra manokana, stock ambany, sokajy, toerana, vidiny sns.
Tantano amin'ny tananao ny tahirinao (stock in / out balance); Fampidirana angon-drakitra mora, fivezivezena eo anelanelan'ny toerana, modules ny tantaran'ny fifanakalozana sy maro hafa.
Miteraha vonona hanonta ny kaomandy fividianana sy ny varotra (faktiora) natokana ho an'ireo mpamatsy sy mpanjifanao! ny lisitra dia azo havaozina ho azy noho ny baiko voamarika efa vita ary maro hafa.
Fanarahan-dia (entana mora simba)
Jereo ireo vokatra efa ho tapitra tsy ho ela, izay vokatra tokony hivoaka voalohany (FIFO sy FEFO) ary avy amin'ny andiany inona; Araho ny daty lany daty ho an'ny andiany tsirairay amin'ny fitehirizam-bokinao, tantano ny andiany mifamatotra mora amin'ny toerana sy vokatra.
Fampiharana Finday Telesto
Telesto dia misy amin'ny iOS & Android izao
Sokajy & Tag
Touch ID (dian-tànana)
Fandraisana Amin'ny Mpampiasa Maro
Tantano Ny Trano Fitobiana
Mpanjifa Sy Mpamatsy
Telesto Ho An'ny Zava-drehetra
Telesto dia novolavolaina sy novolavolaina avy amin'ny fidinana ifotony miaraka amin'ireto indostria manaraka ireto ao an-tsaina: vokatra varotra, orinasa mpamokatra divay sy labiera, fanamboarana, akanjo, vokatra antsinjarany, fananana IT, tompona fivarotana, kamiao, fizarana sakafo, andrim-bola, orinasam-pananana , kojakoja fiara, oniversite & sekoly, kojakoja amin'ny birao, ambongadiny, fanamboarana, fitaterana, milina, fambolena, kojakoja ara-pahasalamana ary maro hafa.
Telesto dia fitaovana lehibe ho an'ny orinasantsika, ny fitaovana consultation azon'ny tsirairay idirana. Amin'ny dingana tsotra dia azonao atao ny mitantana ny tahirinao amin'ny fomba mahomby, amin'ny fomba haingana, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ny famoronana vokatra, ny famokarana fidirana na ny famoahana dia mitaky segondra, ary ny tsara indrindra dia intuitive izany. Raha fintinina, omeko 100% izany.
Mpitantana ny asa @ Madina Kebab
Amin'ny maha orinasa mpanamboatra sakafo salantsalany kely antsika dia miatrika fanamby lehibe izahay hifehezana ny tahiry famokarana ary izay famokarana tsy maintsy mivoaka aloha. Izahay mihitsy aza dia nanandrana nanangana ny rafitray manokana hanitsy ny fizotry ny asa aman-draharaha ataonay, saingy afaka 2 taona dia mbola lavitra ny nantenainay izany. Mandra-pahita Telesto. Ny serivisy tokana miaraka amina endri-tsoratry ny batch izay tena manampy anay hanara-maso ny tahirinay ary tena mamaly ny zavatra niainan'ny mpanjifa. Manoro hevitra 100% an'ity app ity aho.
mpanorina @ mooimeegenomen
Amin'ny maha-orinasa kely amin'ny vokatra anaty trano volo anay, dia enim-bolana no nampiasainay Telesto. Nandritra ny fikarohanay rindranasa iray ahafahanay mitahiry miaraka sy manara-maso ny tahiry, dia i Telesto irery no nahafeno ny safidintsika ary mbola misy mandraka androany. Haingana ny fanohanan'ny mpanjifa. Ny mailaka misy fanontaniana na hevitra dia ampy. Amin'io andro io ihany dia mahazo valiny na vahaolana isika.
Hanatsara Ny Drafitra
Maimaimpoana ny Telesto fa afaka mamoha fiasa mahery vaika kokoa ianao miaraka amin'ny iray amin'ireto drafitra fanatsarana ireto!
20 Vokatra (max)
5 Sokajy & Tag
1 Mpamatsy Sy Mpanjifa
1 Baiko Mividy
12 / 24 tatitra
0 Saha Manokana
Fanontana Amin'ny Birao
2,000 Vokatra (max)
500 Sokajy & Tag
100 Mpamatsy Sy Mpanjifa
100 Baiko Mividy
22 / 24 tatitra
50 Saha Manokana
10,000 Vokatra (max)
10,000 Sokajy & Tag
10,000 Mpamatsy Sy Mpanjifa
10,000 Baiko Mividy
24 / 24 tatitra
100 Saha Manokana
Fanamarihana: raha te hahita ny vidinay amin'ny vola eo an-toerana ianao, azafady misintona ny fampiharana finday (iOS na Android) ary tsidiho ny fizarana fanavaozana.